Tranga roa mitovitovy niseho tany Ambararatabe Avaratra sy tany Antsamaka Bealanana noho ny fikasan’ny olona hampihatra ny dina. Ny 25 novambra teo, vehivavy iray nosamborin’ny olona noho ny filazana azy ho mpamosavy. Ireo olona mampihatra ny dina avy eo no niroso tamin’ny famotorana ilay vehivavy io. Saika hihatra amin’ilay vehivavy ny fitsaram-bahoaka amin’ny fampiharana dina. Nampilaza ny zandary avy hatrany ny fianakavian’ilay vehivavy, ka tonga teny an-toerana ireo. Olona valo avy amin’ny Besaboho, nosamborina ka natolotra ny fitsarana. Naiditra am-ponja ireo olona ireo taorian’izay.
Toy izany koa ny nitranga tany Ambalavelombe, Antsamaka Bealanana, ny 29 novambra teo. Vehivavy iray nosamborin’ny olona 11 avy amin’ny dina Besaboho. Ity vehivavy ity izay voatondro ho nangalatra vola 920.000 Ar ny volana oktobra. Saika niharan’ny dina ihany koa izy io no nampandre ny sefo distrika ny fianakaviany. Nampandre ny OMC izy io ary nidina tany an-toerana ny mpitandro filaminana mitambatra. Vosambotra ny olona sivy tamin’ireo 11 avy amin’ny dina Besaboha. Natao fanadihadiana ireo ary natolotra ny fitsarana.
Anisan’ny tranga mbola manahirana any amin’ny faritra ny fifehezana ny dina sy ny fampiharana ny lalàna, mitarika any amin’ny fitsaram-bahoaka. Samy manao izay saim-patany ny rehetra arakaraka izay mahamety azy, ka mety hampilamina ny fiarahamonina?